Fampiharana saha ny surfaine betaine
Amin'ny maha-fitaovana fanasana ranon-javatra azy, ny hydroxybetaine dia manana solubility rano tsara amin'ny mari-pana marobe sy ny vokatra fanasana tsara. Azo ampiharina amin'ny kojakoja fanasan-dranon-drano avo lenta sy be rano. Alkylamide betaine dia misy fitomboana mahery, mampihetsi-po ambany ary miorina tsara ny foam, ary azo ampiasaina amin'ny savony sy savony misy ranoka vita amin'ny shampoo propyl betaine. Manana fahasosorana amin'ny hoditra ambany sy fiarovana azo antoka izy io, ary mahatsapa hoditra malefaka.
Betaine dia ampiasaina ho emulsifier amin'ny emulsions kosmetika. Milamina ny vahaolany, manana fivezivezena tsara rehefa mihidy amin'ny hoditra, manana fikolokoloana hoditra tsara, ary manana fananana bakteria tsara ary manankarena amin'ny sakafo ho an'ny hoditra.
Ny surfactants amphoteric miorina amin'ny betaine dia ampiasaina amin'ny shampoos miaraka amin'ny surfion anionika sy tsy ionic noho ny fisolokiana tsara, ny fandotoana azy, ny fiarovana azy ary ny fanoherana ny rano mafy. Mampihena ny fahasosorana sy ny vokatra hafa.
Mpanampy amin'ny lamba, fanontana ary fandokoana
Ny fampandrosoana ny surfaineants amphoteric betaine dia avy amin'ny fampiharana amin'ny indostrian'ny lamba. Betaine surfactant amphoteric dia iray amin'ireo sokajy surfactant tsy miovaova simika. Izy io dia mitazona ny toetra amphoterika sy ny fitoniana simika amin'ny faran'ny pH. Noho izany, ny surfaine amphoteric betaine dia mety amin'ny maha-leveling agents azy, ampiasaina ho toy ny agents mandomando, agent scrubbing, agents antistatic ary manalefaka amin'ny fofon'ny volon'ondry.
Ny surfactants amphoteric Betaine dia azo ampiasaina ho microemulsifiers sy dispersants. Rehefa mampiasa surfactants amphoteric betaine amin'ny polymerisation emyrion styrene, poti kely misy fizarana tery (50-100μm) azo atao. Ny surfactants amphoteric Alkyl betaine dia ampiasaina ho emulsifiers ho polymerization styrene. Rehefa notampohan-drano amin'ny rano ny lateks ary nofenoina karipetra landy, akrilika na nylon karipetra, dia afaka mampihena tasy; dodecyl sy tetradecyl betet Alkali koa azo ampiasaina ho toy ny fampiatoana ny agents for aqueous polymerization of vinyl chloride; ny ankamaroan'ny latexes allyl dia miharo noho ny fisian'ny lauryl betaine ambany na coco-betaine; alkyl betaine dia ampiasaina ho emulsifier ho an'ny latex cationic, Miaraka amin'ny emulsifier cationic, ampiasaina manokana amin'ny akora simika amoron-dàlana, ny asany dia mahery kokoa noho ny emulsifier tsy ionic; betaine amphoteric surfactant dia azo ampiasaina amin'ny fanomanana emulsion sary, stearyl betaine no fanomanana ary ny emulsifier an'ny monomer alkyl acrylate sy acrylonitrile ao amin'ny hydratol polymerized mifanaraka amin'ny gelatin. Ny sol dia mitazona fitoniana amin'ny ambaratongam-PH midadasika ary ampiasaina ho emulsion sary.
Additives fanarenana solika
Ny surfactants amphoterika Betaine dia ampiasaina amin'ny fanarenana menaka faharoa sy ny fanarenana menaka tertiary, ary ny fanaparitahana azy ireo dia mahasoa indrindra amin'ny fananganana vatosokay; ny famindrana microemulsions misy betaine na acyl betaine surfactants amphoteric dia afaka manatsara ny tahan'ny fanarenana solika; Alkyl betaine amphoteric surfactants dia mamindra ny gazy karbonika. Satria ny surfactants amphoteric betaine manana solubility tena tsara amin'ny vahaolana masira, dia tsy ho entin'ny ion-kalsioma miiba izy ireo; C12 ~ 14 alkyl Chain sulfite betaine dia famonoana bakteria ho an'ny bakteria mampihena sulfate, izay azo ampiasaina hanarenana solika nohavaozina sy fanadiovan-tsolika menaka.
Sehatra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana
Ny surfactants amphoteric Betaine dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana, fitsaboana, biolojia ary sehatra hafa mifandraika amin'izany. Alkyl betaine dia misy vokany sasany amin'ny asidra amino enantiomerika sy ny molekiola mitambatra mifangaro mifanaraka amin'izany; surfaineant amphoteric betaine dia azo ampiasaina ho toy ny mpandefa adsorption transdermal ho an'ny zava-mahadomelina tsy voatanisa amin'ny rano ionic; betaine amphoteric surfactant dia afaka manatsara ny famotsorana ireo akora mavitrika ao amin'ny menaka misy neomycin sulfate sy chloramphenicol; Sultaine dia mety amin'ny fanasarahana sy fanadiovana ny antigène amin'ny rafitra biolojika, ary azo ampiasaina ho reagents vaksinina sy otrikaretina diagnostika; vita avy amin'ny sectaine Virus Sultaine dia manana fahaizana mahery vaika hanakanana ny fiterahana viriosy ao amin'ny havokavoky ny totozy voatsindry; ny vahaolana aqueous an'ny cetyl sultaine dia ampiasaina hanemorana ny fitrandrahana ireo sela nafindra, toy ny tavy pericardium valizy fo artifisialy, izay hamboarina alohan'ny hametrahana azy. Izy io dia alentika anaty vahaolana amin'ny surfactif amphoteric sulfobetaine; ny vahaolana aqueous an'ny alkyl betaine surfactant amphoteric sy surfactant tsy ionic dia mety amin'ny fitsaboana ny may sy ny rafi-pitsaboana mena sy mivonto amin'ny hoditra; alkyl betaine surfactant amphoteric Surfactants dia mandaitra amin'ny fitsaboana ny fery amin'ny vavony koa. Rehefa ampiasaina amin'ny fanafody salicylate dia afaka mampihena na misoroka ny vay avy amin'ny gastrointestinal vokatry ny fihenjanana na fanala; vahaolana ny sulfobetaine octyl Rehefa manasaraka ny mitochondria dia afaka misoroka ny fahaverezan'ny carnitine mitochondrial. Rehefa mahatratra imbetsaka ny fifantohana amin'ny sulobetaine amin'ny fihenan'ny transferase dia afaka manakana ny carnitine acetyltransferase sy ny carnitine palmitate transferase.
Ny surfactant amphoteric Alkyl betaine dia mpandraharaha famaranana hoditra tsara, izay afaka manamafy ny hoditra amin'ny fanadiovana maina; ny fampidirana surfaineant amphoteric betaine amin'ny rubber alkenyl dia afaka manakana ny firoboroboan'ny solifara misy agents vulcanizing; stearin Acyl betaine dia dispersant tsara, izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny pelletizing slurry rano sy ny fanesorana vovoka; surfaineants amphoterika betaine ampiasaina amin'ny coatings dia manana firaiketam-po mando sy fanoherana ny fanala; ny famolavolana pigment vy, indrindra ireo raikipohy misy aliminioma dia azo afangaro amin'ny loko tsy mahazaka rano hisorohana ny mety fipoahan'ny fipoahana, ary hahatonga ny firakotra hanana endrika metaly tsara, ambonin-tany, firaiketam-po tsara ary fanafoanana ny rano; surfactant amphoteric sulfobetaine Ampiasaina hanomanana fitaovana fandraketana andriamby, rehefa mihosinina surfactants amphoteric betaine ny lubricants methylsilyl, dia mihena be ny tsy fahampian'ny fitateran'ny kapila fampahalalana avo lenta voan'ny hafanana ambony sy ny hamandoana avo be; misy sulfobetaine amphoteric Ny resin'ilay surfactant dia afaka manaparitaka ny vovoka andriamby miaraka amin'ny sombintsombiny tena tsara, ary manatsara ny magnetisation; ny lauryl amidopropyl betaine dia ampiasaina ho iray amin'ireo singa amin'ny vahaolana aqueous asidra hanadiovana ny fibre vera. Manjavona lehibe; Ny fampidirana surfactants amphoteric betaine amin'ny zezika dia afaka manitatra ny andian'ny zezika misy rano amin'ny 15 ka hatramin'ny 27 herinandro. Izany dia tratra amin'ny fanemorana ny fiforonan'ireo precipitates misy magnesia ary mety amin'ny famokarana asidra amôniôly phosorika famokarana; Ny surfactika amphoterika Betaine dia azo ampiasaina ihany koa hamoahana herinaratra varahina, tin, zinc ary metaly hafa hahazoana alloys mamiratra.